Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Ihlabathi le-LGBTQ + yoSuku loKhenketho kwisitayile saseNtaliyane
inkcubeko • Amalungelo abantu • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • LGBTQ • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Usuku Lwehlabathi LGBTQ + Usuku Lwezokhenketho
Ngomhla we-10 ku-Agasti olandelayo iya kuba Lusuku lwe-LGBTQ + lweHlabathi, olusekwe kumazwe aku-Latin America kwaye lamkelwe kwinqanaba lehlabathi.
I-Itali iza kwesi sikhundla kwi-LGBTQ + yoSuku lwezoKhenketho okokuqala nezinye iiarhente.
Ukutyikitya kunye phantsi kwe-Diversity & Inclusion Protocol yi-ENIT i-Arhente yeSizwe yoKhenketho, i-AITGL yaseNtaliyane yoLuntu kunye neLesbian Tourism Association, kunye neSonders & Beach Group.
Umgaqo-nkqubo omtsha ubona i-Itali, njengeendawo eziphambili zamazwe aphesheya, yamkela imigaqo-nkqubo yoLawulo lokwahlukahlukana ukulungiselela ukuqeshwa okubalulekileyo kwe-2022.
Le nkqubo isungulwe ngokujonga ukutyunjwa kweNgqungquthela ye "IGLTA 2022 eMilan" e-Itali. Utshilo uMongameli we-IGLTA uAlessio Virgili, "IGLTA Indibano yowe-2022 eMilano izakukhanya njengesibane e-Itali. ”
Ukhenketho lwe-LGBTQ + e-Itali lubhekisa kwixesha elitsha. Ii-ofisi zehlabathi ze-ENIT zinegalelo kuphando lwecandelo ngenkxaso yeKomiti yezeNzululwazi ye-AITGL, apho abathathi-nxaxheba abakhokelayo kushishino lokhenketho lwase-Itali kunye namaziko bathatha inxaxheba.
UMongameli Virgili wathi: “Ukhenketho lwe-LGTBQ + lwenza i-2.7 yeebhiliyoni zeerandi eItali. Ndinebhongo ngokuba ndifikelele kweli nqanaba liphezulu emva kokuzinikela kwethu ixesha elide ekukhuleni kwale marike ngenkxaso yamaziko namashishini amaninzi. ”
"IGLTA Ingqungquthela sele inamaxesha amnandi, wongeza uVirgili, "kwaye nefuthe lezoqoqosho elinokuveliswa yile nto ngokuqinisekileyo liyakubonisa ukukhula kwelizwe lethu, ukuvelisa izigidi ezi-2 zeedola kwiinkonzo ezincedisayo zeMilan ukusingatha lo msitho."
Ukhenketho lwe-LGBTQ + licandelo elomeleleyo kakhulu elivelisa umdla okhethekileyo oqhuba icandelo lezokhenketho. I-Itali irekhoda iipesenti ezili-10 ze-LGBTQ + ezihamba kwihlabathi liphela ezibonelela ngamathuba kwiinkampani ezifuna ukwahluka kwaye zityala imali kweli candelo libalulekileyo elilungiselela i-Itali njengelizwe elamkelekileyo.
Ukhuseleko, ebelusoloko lubalulekile kubakhenkethi be-LGBTQ +, lubhiyozelwa kwihlabathi liphela kulo nyaka ngomxholo othi "Amava akhuselekileyo kubahambi be-LGBTQ +, kuhambo oluya kubakhenkethi obandakanya wonke umntu."
"Inqanaba langoku lempumelelo, elisiphumo seminyaka emininzi yokusebenza, ikwanguloyiso kunye nesibonelelo sorhwebo kubo bonke abaqhubi base-Itali kweli candelo," uvale ngelo uVirgili.
Usuku Lwehlabathi LGBTQ + Usuku Lwezokhenketho ibhiyozelwa nge-10 ka-Agasti rhoqo ngonyaka kwaye ibandakanya iminyhadala, iingxelo kunye nemisebenzi. Olu suku lukwawonga oovulindlela abakhenkethi abathe bahlahla indlela kwaye benza ukuba indawo yokuhamba ikhuseleke ngakumbi gay, lesbian, bisexual, kunye trans abakhenkethi kwaye ithathela ingqalelo abo babeka phambili ngokubaluleka kuyantlukwano kumashishini abo.
IPodcast enkulu yeGay evela ePuglia uthi:
Agasti 11, 2021 kwi-02: 25
Ezinjani ukuba mnandi iindaba! Ngokophando lwakutsha nje lwe-LGBTQ + yoluntu lwase-Italiya i-Puglia yeyona ndawo iyintandokazi ye-LGBTQ e-Itali + kwindawo yehlobo. IPuglia ikwamkelwe kwilizwe liphela njengenye yeendawo ezi-5 eziphambili zaseYurophu kwezabafazi kwi-LGBTQ + abahambi. Okwenza ukuba iPuglia ibe yindawo efanelekileyo ukuba ibekho nge-10 Agasti 2022.